Ịmụ asụsụ Bekee na asụsụ mba ọzọ. Ụzọ kacha mma ịmụta
Kaadị asụsụ maka ịmụ asụsụ mba ọzọ
Kaadị asụsụ iji mụta asụsụ mba ọzọ bụ ụzọ kachasị mfe na ụzọ kachasị esi achọpụta onwe onye. Otu akụkụ nwere okwu siri ike, akụkụ nke ọzọ nwekwara ihe ọ pụtara ma ọ bụ nsụgharị ya. Mgbe ị na-esepụta kaadị, ị na-amalite ile anya na kaadị ndị ahụ, jiri nwayọọ nwayọọ wepụta ihe ị mụtaworo, […]
Kedu ka esi emezi okwu? Ụzọ kachasị mma isi na-eburu okwu ọhụrụ
Kedu ka esi emezi okwu? Ụmụ akwụkwọ ọ bụla na-amụ asụsụ mba ọzọ jụrụ ajụjụ a. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche isi meziwanye okwu, nke anyị ga-atụle n’isiokwu a: 1. Na-ege ntị ma na-edegharị okwu ndị ịchọrọ ịkọ 2. Jiri usoro kaadị ọkụ 3. Ịmepụta mkpakọrịta na visual 4. Icheta ahịrịokwu na nkebi […]
Kedu otu esi amụta asụsụ Bekee ngwa ngwa?
Kedu otu esi amụta asụsụ Bekee ngwa ngwa? Ajụrụ m onwe m ajụjụ a afọ abụọ gara aga (mgbe ọ dị afọ 32). Ebe m malitere ịmalite ịmụ asụsụ ọhụrụ site n’ịgba chaa chaa, ahụrụ m nsogbu atọ dị mkpa: 1. Ịkwalite okwu na nchekwa nke okwu ncheta 2. Enweghi oge maka ịmụ asụsụ mba […]
Kedu otu esi achọta ndị ọkà okwu ala maka omume asụsụ?
Kedu otu esi achọta ndị ọkà okwu ala maka omume asụsụ? Ajụjụ a nwere mmasị n’ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-amụ asụsụ mba ọzọ. Mgbe mmepe nke ọma nke nsụgharị mbụ nke mobile LingoCard na-etinye ntinye ya na ọha na eze mfe inweta, ngwa ahụ nwere ọtụtụ iri puku […]